မရယ်နိုင်လောက်အောင် ဟာသ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတစ်ခုကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ မောင်သီ…. – Cele Snap
မရယ်နိုင်လောက်အောင် ဟာသ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတစ်ခုကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ မောင်သီ….
ပရိတ်ကြီးရေ .. နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် သူတို့ချစ်တဲ့ အနုပညာတွေနဲ့ ပေးဆပ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော်တွေဖြစ်တဲ့ အနုပညာကြယ်ပွင့်တော်တော်များများဟာ ဒီအစောပိုင်းနှစ်တွေမှာ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကြွေလွင့်ခဲ့ရပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်လို့ ကြွေလွင့်သွားသည့်တိုင်အောင် ယနေ့တိုင် ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာနေရာယူနေဆဲပါ ။
လတ်တလောမှာတော့ ဒါရိုက်တာမောင်သီက ကြွေလွင့်သွားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူ့ရဲ့ခံစားချက်အချို့ကို အခုလို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ် ။ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် (၄) ယောက် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဟာသ ဇာတ်ဝင်ခန်း ပုံရိပ်လေးနဲ့အတူ ဒီ ဇာတ်ဝင်ခန်း မှာ သူတို့(၄)ယောက် ရယ်စရာတွေ ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော် မရယ်နိုင်လို့ TV ပိတ်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့စာသားလေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။
ဒီအနုပညာရှင်တွေ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကတော့ ထင်ပေါ် ၁၂နှစ်ခွဲ ၊ ကုသိုလ် ၆နှစ်ခွဲ ၊ ကင်းကောင် ၂နှစ် ၊ ဧရာ ၁လ ခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ လူသေပေမယ့် နာမည်မ သေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးကတော့ မရယ်နိုင်လောက်အောင် သူတို့တွေကို ပြန်လည်တမ်းတ စေခဲ့တယ်ထင်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
Source : Maung Thi
ပရိတျကွီးရေ .. နှဈပေါငျးမြားစှာတိုငျအောငျ သူတို့ခဈြတဲ့ အနုပညာတှနေဲ့ ပေးဆပျပွီး ပရိသတျတှကေို ပြျောရှငျစခေဲ့တဲ့ ဟာသ သရုပျဆောငျ လူရှငျတျောတှဖွေဈတဲ့ အနုပညာကွယျပှငျ့တျောတျောမြားမြားဟာ ဒီအစောပိုငျးနှဈတှမှော တဈယောကျပွီးတဈယောကျ ကွှလှေငျ့ခဲ့ရပါတယျ ။ ပရိသတျတှခေဈြရတဲ့ အနုပညာရှငျတှဖွေဈလို့ ကွှလှေငျ့သှားသညျ့တိုငျအောငျ ယနတေို့ငျ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာနရောယူနဆေဲပါ ။
လတျတလောမှာတော့ ဒါရိုကျတာမောငျသီက ကွှလှေငျ့သှားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတှနေဲ့ပတျသတျပွီး သူ့ရဲ့ခံစားခကျြအခြို့ကို အခုလို ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ ။ ကှယျလှနျသှားပွီဖွဈတဲ့ ဟာသ သရုပျဆောငျ လူရှငျတျော (၄) ယောကျ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ဟာသ ဇာတျဝငျခနျး ပုံရိပျလေးနဲ့အတူ ဒီ ဇာတျဝငျခနျး မှာ သူတို့(၄)ယောကျ ရယျစရာတှေ ပွောနကွေတယျကြှနျတျော မရယျနိုငျလို့ TV ပိတျလိုကျတယျ ဆိုတဲ့စာသားလေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ ။
ဒီအနုပညာရှငျတှေ ကှယျလှနျသှားခဲ့တာကတော့ ထငျပျေါ ၁၂နှဈခှဲ ၊ ကုသိုလျ ၆နှဈခှဲ ၊ ကငျးကောငျ ၂နှဈ ၊ ဧရာ ၁လ ခနျ့ရှိခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ ။ လူသပေမေယျ့ နာမညျမ သတေဲ့ အနုပညာရှငျတှေ ရဲ့ ဇာတျဝငျခနျးလေးကတော့ မရယျနိုငျလောကျအောငျ သူတို့တှကေို ပွနျလညျတမျးတ စခေဲ့တယျထငျပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ ..။
ခွေးစာတွေကို ငိုပြီးစားနေရှာတဲ့ အဘိုးကို ရှာပြီး သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Sinon ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး…..